Compressor Oil Filter Replacement uye Maintenance - Airpull (Shanghai) firita Co., Ltd
Guruva huri woga mumhepo vachange akaramba mudenga firita. Kurambidza sikuruwa mhepo compressor rurege abraded kana mhepo mafuta separator rurege makavhara, kuti Sefa chinhu inoda kuchenesa kana pakutsiva pashure pokunge rakashandiswa nokuda 500hours. In kushanda ezvinhu apo rinorema guruva aripo, unofanira kupfupisa Kutsiviwa yatinofema. Kumisa muchina risati firita kutsiviwa. Nechinangwa kuderedza chemabhazi nguva, mumwe Sefa mutsva kana vakachenesa kupembedza Sefa inokurudzirwa.
1. Ndinonzwa vawane zvose magumo Sefa achipikisana sandara pamusoro, kuti kubvisa dzakawanda rinorema, rakaoma guruva.
2. Shandisai yakaoma mhepo ine pazasi 0.28Mpa kuvhuvhuta pamusoro kutungamirirwa mhepo kubvisa. Kure pakati kamwene uye akapeta bepa anofanira zvinenge 25mm. Uye kushandisa kamwene kuvhuvhuta uye pasi pamwe kumusoro.
3. Pashure pokutarira, unofanira kubvisa Sefa chinhu kana ane mwena, kukuvara, kana kuva wakawondereiko kudai mazuva ose.
1. sikuruwa kure mhepo compressor mafuta Sefa, uye chisiye.
2. Geza Sefa deko kunyatsoongorora.
3. Tarisa chokupika ari differential kufurirwa yatumira chikwata.
4. girisi Sefa rakavhara gasket namafuta.
5. Screw ari Sefa chinhu kusvikira chisimbiso gasket, uye ipapo kushandisa ruoko rwako kuti muzvisimbise zvakasimba.
6. Check kana paine leakage kamwe iwe akatanga muchina. Attention: bedzi kana mhepo compressor rave akamira uye hapana kumanikidzwa munyika, kuti iwe unogona kutsiva firita maatomu akafanana. Mukuwedzera, kudzivisa zvinokuvadza scalding anokonzerwa inopisa mafuta.